Na-eleda anya Social Media | Martech Zone
Na-eleda Social Media anya
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 15, 2010 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 15, 2010 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, Roundpeg mere nyocha mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma jikọta ya ọnụ whitepaper na nsonaazụ. Ka m na-agụ na peeji nke, otu n'ime nsonaazụ metụtara m n'ezie. Karịrị 70% nke ndị nwe ụlọ ọrụ nyochara kwuru mgbasa ozi mgbasa ozi site na 10% ma obu obere nke ngụkọta azụmahịa ha.
N'eziokwu, ekwetaghị m na ndị ahịa a mara etu mgbasa ozi mmekọrịta na-emetụta azụmahịa ha. Ka m na-ele anya na arịrịọ sitere na ihe ndị na-elekọta mmadụ, ọbụna ụlọ ọrụ mgbasa ozi m nwere usoro ole na ole. Ma nke ahụ abụghị ezigbo foto. Amaara m na m nwere atụmanya ndị nyochara m n'ịntanetị tupu ị kpọọ. N'ime ndu niile m nwetara n'afọ gara aga, ọ bụ naanị mmadụ abụọ bụ okwu ọnụ nke na-ahụbeghị m n'ịntanetị.
Otú ọ dị, n’ime mmadụ abụọ ahụ, ha gwara m okwu n’ezie n’ihi na onye ha hụrụ banyere m e kwere nkwa ọlụ soro m na soshal midia. Ya mere,… e nwere n'ezie ụzọ abụọ na-ajụ na-aza ajụjụ nke mmadụ mgbasa ozi mmetụta:
Kedu pasent nke ndu ị na-enweta site na mgbasa ozi mmekọrịta?
Kedu pasent nke ndị ndu gị nyochara gị site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ chọta gị site na netwọkụ mmekọrịta gị na ntanetị?
Azịza nke # 1 dị ala, ọbụlagodi m! Azịza nke # 2, ezie, bụ 100%. N'eziokwu, dị ka a elekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnga, anyi bu ndi ozo. Agbanyeghị, m ga-adị njikere ịkụ nzọ na ọtụtụ n'ime ndu gị na-abata emeela nyocha ị n'ịntanetị - gụnyere n’ime netwọkụ mmekọrịta gị. Nke ahụ pụtara na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ọ gaghị ebugharị azụmahịa gị niile, mana ọ na-emetụta azụmahịa gị.
Mgbasa mgbasa ozi emeghewokwa ohere ndị ọzọ - gụnyere nkwupụta okwu ihu ọha na ọbụnadị ide a ịde blọgụ akwụkwọ. Ndị ahụ na-ekwu okwu njikọta ewetawo ndu… na eche m na akwụkwọ ahụ ga-. Nke a sitere na mbọ m tinye na soshal midia.
Mgbe ị nwetara ohere, jụọ ndị ndu gị ma ha enyochaghị gị na ntanetị ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ na netwọk azụmahịa ha. Ihe m chere bụ na ọ ga-eju gị anya na nsonaazụ ahụ!
SEOmoz naputara nne niile SEO Ngwa
Email Desktọpụ: Eze Na-arụpụta Ọrụ
Aug 15, 2010 na 1:48 PM
Touched metụrụ otu isi ihe na-adọrọ mmasị. Otutu ndi nwere obere ahia amaghi ebe ahia ha si. Ọmụmaatụ. m zutere mmadụ na ihe omume Rainmaker. Ha abughi ndi ahia, mana ha na eme ka m mata onye ozo, onye n’eme ka m mata onye n’eme… .Mgbe ahu echefuru m na ihe mbu sitere na ndi mmiri ozuzo bia.
Ma ọ bụ ndị ahịa m na-eme nkwekọrịta na-agwa m na ha na-azụ ahịa site na ibe akwụkwọ edo edo, mana ajụkwala ihe kpatara ụlọ ọrụ niile edepụtara ndị ahịa kpọrọ ha. Ọ na-abụkarị n'ihi na ha nụrụ banyere ụlọ ọrụ ahụ, ma na-achọkwa nọmba ekwentị ha.
Ọ bụla azụmahịa nwe kwesịrị ime ka ọ a àgwà ịjụ ajụjụ ugboro ugboro, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịmata nke nke ha ahịa na-eme na-arụ ọrụ n'ezie.